Dalalka - TPAN - World March
Dalalka - TPAN
Bogga ugu weyn » Dalalka - TPAN
Heshiiska Mamnuucidda Xatooyada Hubka Nukliyeerka ah
The 7 July 2017, ka dib markii muddo tobaneeyo sano ah ee shaqada by Iōanēs iyo la-hawlgalayaasheeda, inta badan baaxad weyn oo quruumaha dunida ee qaatay heshiis durkin caalamiga ah, in la mamnuuco hubka nuclear, si rasmi ah loo yaqaan Treaty ee ku saabsan Mamnuucidda ee Hubka Nukliyeer . Waxay geli doontaa sharci sharci ah markii ay dowladaha 50 saxiixeen ayna ansixiyeen.
Xaaladda hadda jirta ayaa ah inay jiraan 83 oo saxeexay iyo 50 oo iyaguna ansixiyay. Waxaan u baahnayn 0 si aan u dhaqan galno, marka aan wada gaarno wadarta.
Qoraalka buuxa ee heshiiska
Xaalka saxiixa / ansixinta
Ka hor inta heshiiska, hubka nuclear ahaayeen hubka kaliya burburka culus geysta oo aan hoos jiray mamnuucista total (haddii ay hubka kiimikada iyo bakteeriyadda), inkastoo ay musiibo cawaaqib bani'aadamnimada iyo deegaanka ee mudada dheer. Heshiiska cusubi wuxuu ugu dambeyntii buuxinayaa farqiga u dhexeeya sharciga caalamiga ah.
Mamnuucayaa quruumaha horumariyaan, imtixaanka, soo saaraan, soo saaridda, kala iibsiga, hantidaan, dukaanka, isticmaalka ama ku hanjabay in ay isticmaalaan hub nuclear, ama u oggolaadaan hubka nuclear on dhulkeeda la dhigay. Waxa kale oo ay mamnuuc si ay u caawiyaan, dhiiri ama u abaari qof si ay u galaan mid ka mid ah howlahaas.
Ummadda leh hubka nukliyeerka ah ayaa ku biiri kara heshiiska, hadba inta ay ogolaato in lagu burburiyo iyada oo la raacayo qorshe sharci ah oo waqti go'an ah. Sidoo kale, waddan kale oo ka mid ah hubka nukliyeerka ah ee wadan kale oo dhulkeeda ah ayaa ku biiri kara, haddii ay oggolaato in la tirtiro muddo wakhti gaar ah.
Qaramada waxaa waajib ku ah in ay bixiyaan gargaar dhamaan dhibbaneyaasha oo ka mid ah isticmaalka iyo imtixaanka ee hubka nukliyeerka ah iyo in ay qaadaan tallaabooyin waayo-barasho jawi wasakhaysan. Distoorka waxa uu aqoonsan yahay dhaawaca soo gaaray ay sabab u tahay hubka nuclear, ay ka mid yihiin saamaynta ay ku munaasab ahayn haweenka iyo gabdhaha, iyo dadka dunida ku baahsan.
heshiis ayaa lagu gorgortamayo ee xarunta Qaramada Midoobay ee New York ee March, June iyo July 2017, qayb ka mid ah ka sii badan waddammada 135 iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah. 20 September 2017 ayaa loo furay saxiixa. Waa mid joogto ah waxayna noqoneysaa mid sharci ahaan ku xiran quruumaha ku soo biiraya.
Iskaashiga TPAN in uu dhaqan galo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan Dunida March ee Nabadgalyada iyo Dagaalka.
Dukumentiga saxiixa ama ansixinta